Iyo Inbound Yekutengesa Yekutarisa: 21 Maitiro Ekukura | Martech Zone
Muvhuro, Ndira 15, 2018 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Sezvaunogona kufungidzira, isu tinowana yakawanda yezvikumbiro kushambadzira infographics pa Martech Zone. Ndosaka tichigovana infographics vhiki rega rega. Isuwo tinofuratira zvikumbiro kana tawana infographics iyo inongoratidza kuti kambani haina kuita mari hombe yekuvaka infographic yemutengo. Pandakadzvanya pamusoro peiyi infographic kubva kuna Brian Downard, Co-Muvambi we ELIV8 Bhizinesi Maitiro, Ndakavaziva sezvo takagovana rimwe basa ravakaita.
Izvi infographic; zvisinei, hapana chakaperera pakukwana! Brian nechikwata chake vakaburitsa nyowani infographic pakuzadzisa bhizinesi kukura ine inbound kushambadzira iyo yakakosha, yakanaka, uye inopa yakakosha manhamba ekutsigira yega yega zano kumusoro. Brian nechikwata chake vanopa zvakabatanidzwa zvekubvunza pamwe nekushambadzira masevhisi kune anoshamisa akasiyana mabhizimusi vatengi.
Chii chinonzi Inbound Marketing?
Inbound kushambadzira iri zano rinoshandisa zvemukati kukwezva tarisiro yekuita uye kushandura nemakambani online. Makambani anoshandisa mablog, podcasts, vhidhiyo, eBooks, matsamba, whitepapers, organic organic, zvigadzirwa zvemukati, kushambadzira midhiya yenhau, uye kukwidziridzwa kwakabhadharwa kusvika kune akakodzera vateereri.
Brian akaisa pamwechete iyi infographic inopa iyo inbound yekutengesa yekutarisa ye 21 yakakosha nzira dzekuendesa izvo zvinokura rako bhizinesi uchishandisa inbound kushambadzira marongero.
Dhawunirodha Yakawedzerwa 94 Point Checklist
Maitiro Ekumhanyisa Bhizinesi Kukura neInbound Kushambadzira
Gadzira Kukosha neBlogging - Mabhizinesi ayo blog anowana 77% yakawanda traffic uye 97% zvimwe zvinongedzo kupfuura izvo zvisingaiti.
Shandisa Zvemagariro Midhiya kuDhiraina Traffic - 2.03 mabhiriyoni social media vashandisi ipa mabhizinesi chiteshi chitsva chinoshamisa ku kutyaira traffic uye tsvaga vatengi vatsva.
Shandisa SEO Kuti Uwanikwe Pamhepo - 93% yezviitiko zvepamhepo tanga ne # injini yekutsvaga. Paunonyatsogadzirisa yako saiti uye zvemukati zveinjini dzekutsvaga, iwe ucha wedzera nzvimbo dzako uye tora traffic yakawanda.
Shandisa Vamwe Vateereri Vevanhu - Mabhizinesi anoona a 6-to-1 kudzoka pavanogona kuwana nekuita vateereri vanokodzera pane mamwe masaiti.
Gadzira Kudzokorora uye PPC Pamhepo Ads - Vashanyi vanodzokororwa vari 70% zvimwe kutendeuka pawebhusaiti yako.
Tungamira Traffic neCall-To-Action - 70% yebhizimisi havana chero anokosha mafoni-kune-chiito pane yavo peji rembwa.
Gadzira Ukoshi neZvinyorwa Zvemukati - Premium #content inogadzira Katatu zvakapetwa zvakawanda sekushambadzira kwetsika uye mari 62% zvishoma.
Chinja Vashanyi neLanding Mapeji - 56% yeese webhusaiti kudzvanya inotungamirwa kune yemukati peji, kwete peji rekumba.
Shandisa Opt-In Mafomu Ekusimudzira Shanduko - Mabhizinesi ane opt-in #forms anogona wedzera huwandu hwekushandurwa ne1000% kana zvimwe!
Shandisa Zviratidzo Zvemagariro Kugadzira Kutendeseka - Mutengi # kudzokorora kunogona wedzera kushambadzira kushanda ne54% nekuti 88% yevanhu vanovimba #zviongororwa nevamwe vatengi zvakanyanya sekuvimba kwavo kurudziro kubva kune avo vaunosangana navo.
Shandisa Vatengi Ukama Hwekutungamira kuteedzera Inotungamira - CRM inogona wedzera mari ne41% pamunhu wekutengesa painoshandiswa kuteedzera nekurera zvinotungamira.
Tumira maemail kuti uvhare zvimwe zvekutengesa - Yese $ 1 yakashandiswa kushambadza neemail ine avhareji kudzoka kwe $44.25!
Set Up Kushambadzira Kushanda - Kugadzira iyo kutungamirira kutarisira maitiro anogadzira a 10% kana kuwedzera kukuru mune mari mumwedzi 6-9 chete.
Gadzira Zvekutengesa Zvinotarisisa Zvemukati - 61% yevanhu ari mukana wekutenga kubva kukambani inounza #content.
Shandisa Analytics Kuti Uwane Top Channels - +50% yebhizimisi kuzviwana zvakaoma ku funga zvekushambadzira zvakananga kune zviwanikwa zvemari.
Iva Nekunze Kwevatengi Rutsigiro - 65% yevatengi vanosiya pamusoro a kuroora varombo vatengi chiitiko!
Gadzira Makomendi paSocial Media - 53% yevanhu vanotevera zvigadzirwa pamasocial media vanonyanya kuvimbika kune izvo zvigadzirwa.
Makomborero Akavimbika Vatengi - Zvinodhura 5 nguva zvakawanda kuti uwane vatengi vatsva kupfuura zvazviri kuita zviripo. Ndokusaka zvakakosha kuti iwe mubayiro wako akavimbika vatengi kuvachengeta vachidzoka kune zvimwe.
Shandisa Kuzvimiririra kuDhivha Engagement - Mabhizinesi anoona kuwedzera kwe 20% mukutengesa nezviitiko zvakasarudzika uye mazano ku ipa vatengi zvirimo uye zvigadzirwa zvavanoda.
Shandisa Ongororo & Zvishandiso Zvemhinduro - Zvinotora 12 zviitiko zvakanaka zvevatengi kugadzirisa chete 1 isina ruzivo. Kuunganidza mhinduro kunobatsira bvisa mukana yeakashata mutengi ruzivo.
Unganidza Ongororo & Uchapupu - Zvidzidzo zvinoratidza izvozvo70% yevatengi tarisa chigadzirwa # kudzokorora usati waita kutenga. Kubvunza vatengi wongororo panguva chaiyo, ichagadzira brand vatsigiri kuti inokwezva vanhu vatsva.
Tags: AnalyticsVateereriBloggingBrian Downardkudana kuzviitoinodaidzira chiitoChannelscheki rondedzerochecklistkutendeukakubatanidzwa bloggingkutendesekaCRMctakuvimbika kwemutengimutengi wehutano hwehukamakasitoma rutsigiroELIV8Email Marketingmhinduro maturusiinbound Marketinginbound yekutengesa yekutarisakumhara kushandurwa kwemapejipamapejivatengi vakavimbikamarketing automationasaitamafomu ekupinda-mukatiPersonalizationReviewskutengesa kwakanangana nezvirimoseoevanhu vezvenhaumumagariro uchapupusurveyUchapupu
Gumiguru 28, 2015 na1: 00 PM
Ini ndaingoda kutaura kuti maita zvekare nekugovana uye nemutsa mazwi!
Gumiguru 28, 2015 na2: 05 PM
Zvese zvakakodzerwa, Brian!
Nov 5, 2015 pa4: 16AM
Uchaona iyi yekutarisa. Thx yakawanda
Mbudzi 5, 2015 na3: 14 PM
Jan 11, 2016 pa 8: 29 AM
Icho chikuru chakazara chekushambadzira chinyorwa chakagovaniswa.